သားသမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း– မှန်မှန်ကန်ကန် ချီးမွမ်းပေးတာက ကလေးတွေကို သင်ပေးရာ၊ လှုံ့ဆော်အားပေးရာ ရောက်တယ်
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ဘာသာတရားကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာကြပြီလား
တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခန်း သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦး ဘုရားသခင်ကို ဘာကြောင့် ယုံကြည်လာ
မိသားစုအတွက် အကူအညီ ကလေးတွေကို ချီးမွမ်းပေးနိုင်ပုံ
သမ္မာကျမ်းစာ​ရှုထောင့် ဒီလောကရဲ့ အဆုံး
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား အပင်တွေရဲ့ သင်္ချာစွမ်းရည်
ယေဟောဝါသက်သေတွေအကြောင်း မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းများ
နိုးလော့! | နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကန်နာဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီကာအွန်ဒီ ကီချူဝါ (ကူဇ်ကို) ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆာမိုအာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဇူးလူး တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တီဂရင်ယာ တူရကီ တော့ခ် ပီဆင်း တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နီပေါ နော်ဝေး ပန်ဂျာဘီ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဗီယက်နမ် ဘင်ဂါလီ ဘစ်လာမာ ဘူလ်ဂေးရီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား မာရသီ မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လူဗာလီ ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အီတလီ အီဘန် အီလိုကို အူရ်ဒူ အေးဝေး
မိသားစုအတွက် အကူအညီ | သားသမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း
ကလေးကို ချီးမွမ်းပေးလေ ကောင်းလေပဲလို့ လူတချို့ ပြောကြတယ်။ ကလေးကို အမြဲ ချီးမွမ်းပေးရင် သူ့ကို ဖျက်ဆီးရာကျတယ်၊ ကလေးက ငါ ချီးမွမ်းခံထိုက်တယ်လို့ ယူဆသွားနိုင်တယ်လို့ တခြားသူတွေ ပြောတယ်။
ကလေးကို ဘယ်လောက် ချီးမွမ်းရမလဲ ဆိုတာရော ဘယ်လို ချီးမွမ်းပေးရမလဲ ဆိုတာကိုပါ ထည့်တွက်ဖို့ လိုတယ်။ ဘယ်လိုချီးမွမ်းရင် အကျိုးရှိမလဲ။ ဘယ်လို ချီးမွမ်းတာကတော့ အကျိုးယုတ်စေနိုင်သလဲ။ ကလေးအတွက် အလားအလာကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဘယ်လို ချီးမွမ်းပေးနိုင်မလဲ။
ချီးမွမ်းတာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ပုံတွေက မတူညီဘူး။ အောက်ပါအချက်တွေကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ–
ချီးမွမ်းလွန်းတာက အကျိုးယုတ်စေနိုင်တယ်။ တချို့မိဘတွေက ကလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုများလာအောင် မချီးမွမ်းသင့်ဘဲ ချီးမွမ်းပေးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ကလေးတွေက “အပိုစကားတွေပြောနေမှန်း ရိပ်မိတယ်။ တကယ်မဟုတ်ဘဲ ပြောနေမှန်းလည်း သိနိုင်ကြတယ်။ မြှောက်ပင့် ပြောတယ်ဆိုတာကို သူတို့သိလို့ သင့်ကို ယုံတော့မှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီး ဒေါက်တာ ဒေးဗစ် ဝေါ့ရှ်က ပြောတယ်။ *
စွမ်းရည်ရှိလို့ ချီးမွမ်းပေးတာက ပိုကောင်းတယ်။ သမီးလေးမှာ ပုံဆွဲနိုင်တဲ့ ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီအတွက် သူ့ကို ချီးမွမ်းပေးရင် အဲဒီစွမ်းရည် ထက်မြက်လာအောင် သူ ပိုပြီး ကြိုးစားချင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့၊ အဲဒီပင်ကိုစွမ်းရည်ကိုပဲ အာရုံစိုက် ချီးမွမ်းပေးရင် လွယ်လွယ်လေး လုပ်နိုင်တာကိုပဲ လုပ်တာ ကောင်းတယ်လို့ ကလေး ထင်သွားနိုင်တယ်။ ခက်ခဲတာတွေ ကြုံလာရင် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ထင်ပြီး လုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ “ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုရင် ငါမှ မလုပ်နိုင်တာ ဘာလို့ ကြိုးစားရမှာလဲ” ဆိုပြီး တွေးမိသွားနိုင်တယ်။
ကြိုးစားတဲ့အတွက် ချီးမွမ်းပေးတာက အကောင်းဆုံးပဲ။ ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့အတွက်ပဲ ချီးမွမ်းပေးတာထက် ကြိုးစားလို့၊ ဇွဲရှိလို့ ချီးမွမ်းခံရတဲ့ကလေးတွေဟာ စွမ်းရည်ရှိလာဖို့ စိတ်ရှည်ရမယ်၊ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကို သိလာလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို သိလာတဲ့အတွက် “ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစား လုပ်ကြတော့တယ်။ မအောင်မြင်ရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ၡုံးနိမ့်သူလို့ မယူမှတ်ဘဲ သင်ယူနေသူလို့ ရှုမြင်ကြတယ်” ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် (Letting Go With Love and Confidence) က ဖော်ပြတယ်။
ကြိုးစားတဲ့အတွက် ချီးမွမ်းပေးပါ။ “ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိလို့ ပုံကောင်းကောင်း ဆွဲနိုင်တာ” လို့ ချီးမွမ်းတာထက် “စိတ်ကူးဉာဏ်အပြည့်နဲ့ ဒီပုံကို ဆွဲထားပါလား” လို့ ချီးမွမ်းပေးတာက ပိုကောင်းတယ်။ အဲဒီစကား နှစ်ခွန်းစလုံးက ချီးမွမ်းစကားတွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့၊ ပထမစကားတစ်ခွန်းဟာ မွေးရာပါစွမ်းရည်ရှိမှပဲ တော်မှာတတ်မှာလို့ ပြောလိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတွက် ချီးမွမ်းပေးတဲ့အခါ လေ့ကျင့်မှုများရင် စွမ်းရည်ထက်မြက်လာမယ်လို့ သင်ပေးရာရောက်တယ်။ ဒါမှ၊ ကလေးက အခက်အခဲတွေ ကြုံလာရင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိရှိ ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။​—ကျမ်းစာအကြံပြုချက်– သုတ္တံ ၁၄:၂၃။
မအောင်မြင်တဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သင်ပေးပါ။ လူကောင်းတွေတောင် အမှားလုပ်ကြတယ်၊ အကြိမ်ကြိမ် မှားမိနိုင်တယ်။ (သုတ္တံ ၂၄:၁၆) ဒါပေမဲ့ အမှားလုပ်မိပြီးနောက် အဲဒီကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက် လုပ်စရာရှိတာကို ကြိုးစားလုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကလေးမှာ အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိလာအောင် ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်မလဲ။
ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ဥပမာ– “သမီးလေးက သင်္ချာ သိပ်တော်တာပဲ” လို့ အမြဲ ချီးမွမ်းနေတော့ ကလေးက သင်္ချာထူးချွန်တဲ့စွမ်းရည် သူ့မှာ ရှိတယ်လို့ ယူမှတ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ သင်္ချာလည်းကျရော၊ ငါ့မှာ အဲဒီပင်ကိုစွမ်းရည် မရှိတော့ဘူး၊ ဆက်ကြိုးစားလည်း မထူးပါဘူးလို့ ယူမှတ်သွားနိုင်တယ်။
ကလေးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ချီးမွမ်းပေးရင် သူ့မှာ ဇွဲရှိလာအောင် ကူညီပေးရာရောက်တယ်။ ၡုံးနိမ့်မှုတစ်ခုကို ဘေးဆိုးကြီးတစ်ခုလို့ မယူမှတ်ဘဲ နောက်တစ်နည်းနဲ့ ကြိုးစားရင် အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကို မွေးမြူပေးနိုင်တယ်။​—ကျမ်းစာအကြံပြုချက်– ယာကုပ် ၃:၂။
အပြုသဘောပါပါ ဝေဖန်ပေးပါ။ နည်းမှန်လမ်းကျ ဝေဖန်ပေးရင် ကလေး စိတ်ဓာတ်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။ ချီးမွမ်းသင့်တဲ့အခါ ချီးမွမ်းနေရင်၊ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက် ဝေဖန်ပေးတာကို ကလေးက လိုလိုလားလား လက်ခံမှာဖြစ်တယ်။ ကလေးရဲ့ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေက သူ့ကိုရော မိဘကိုပါ ပျော်ရွှင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။​—ကျမ်းစာအကြံပြုချက်– သုတ္တံ ၁၃:၄။
^ စာပိုဒ်၊ 8 Why Kids​—of All Ages​—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ထားပါတယ်။
“ကြိုးစား၍လုပ်လေရာရာ၌ ကျေးဇူးရှိ၏။”​—သုတ္တံ ၁၄:၂၃။
“ငါတို့ရှိသမျှသည် ကြိမ်ဖန်များစွာ မှားတတ်ကြ၏။”​—ယာကုပ် ၃:၂။
‘လုံ့လဝီရိယရှိသူကတော့ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝလိမ့်မယ်။’​—သုတ္တံ ၁၃:၄၊ ကဘ။
ပင်ကိုအစွမ်းအစထက် စွမ်းရည်အသစ် ရှိလာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သူတွေအကြောင်း ကျမ်းစာမှာ ပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဘုရားသခင်က မောရှေကို ဩဇာအာဏာရှိပြီး ခေါင်းမာတဲ့ အီဂျစ်ဘုရင်ဆီ သွားခိုင်းတဲ့အခါ သူက “အကျွန်ုပ်သည် နှုတ်သတ္တိ မရှိပါ” လို့ ပြောခဲ့တယ်။ (ထွက်မြောက်ရာ ၄:၁၀) ယေရမိလည်း ပရောဖက်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရတဲ့အခါ၊ “အကျွန်ုပ်သည် မဟောမပြောတတ်ပါ။ သူငယ်ဖြစ်ပါ၏” ဆိုပြီး ပြောခဲ့တယ်။ (ယေရမိ ၁:၆) ဒါပေမဲ့၊ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
သင်ခန်းစာက ဘာလဲ။ ကိုယ့်ကလေး အလားအလာကောင်းဖို့ သူ့ပင်ကိုအစွမ်းအစအပေါ် မူမတည်ဘူး။ သူ ကြိုးစားတဲ့အတွက် ချီးမွမ်းပေးပါ၊ အဲဒီအခါ သူ့မှာ ရှိလာတဲ့စွမ်းရည်ကြောင့် ကိုယ်ရော သူပါ ဝမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။
ဆုံးမတယ်ဆိုတာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထုတ်တာ​၊ အပြစ်​ပေးတာလောက်ပဲ မဟုတ်​ပါဘူး။
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ | ဘာသာတရားကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာကြပြီလား
နိုးလော့! နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ | ဘာသာတရားကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်းလာကြပြီလား
ငါသာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ခေတ်မှာ စာနာမှုရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း
သားသမီးတွေကို ဆုံးမသွန်သင်မှု လျော့နည်းသွားပြီလား